Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) - Page 24 of 33 - Hello Sayarwon
Dr. Sandy Kyaw မှ ရေးသားသည်။ 03/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သင်က အရမ်းမြန်မြန်ရှုတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ကို ရှုသွင်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုရှုထုတ်ခြင်း ကိုညီညီမျှမျှ ပြ ုလုပ်ခြင်းနဲ့ ပုံမှန်တဲ့အသက်ရှုမှုကိုရရှိမှာပါ။ သင်ရှုတာထက်ပိုပြီး ရှုထုတ်မှုပြ ုလုပ်ခဲ့ရင် ဒီညီမျှမှ ုက ပျက်သွားမှာပါ။၎င်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ခန္ခါထဲမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ လျော့သွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်နည်းသွားခြင်းက သွေးကြောတွေကိုကျဉ်းစေပြီး ဦးနှောက်ကိုသွေးလျှောက်မှုလျော့စေပါတယ်။ ဒီလိုသွေးလျှောက်မှုနည်းခြင်းကြောင့် ခေါင်းမူ်းခြင်းနှင့် လက်ချောင်းတွေမှာ ထုံကျင်မှုတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းအသက်ရှုမြန်ခြင်းမျိုးဆိုပါက သတိလစ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်ရှုမြန်ခြင်းကိုတွေ့ရတာရှားပါတယ်။ ၎င်းက တစ်ခါတစ်လေမှာဖြစ်တတ်ခြင်း၊ ကြောက်လန့်တာကိုတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကိုထိန့်လန့်ကြောက်ရွံတဲ့အချိန်တွေမှာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ခြားအခြေအနေတွေကတော့ စိတ်ခံစားရမှုများခြင်း၊ ၎င်းတို့ကတော့စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊စိတ်ဖိစီးခြင်းနှင့်ဒေါသထွက်ခြင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အသက်ရှုမြန်ခြင်းက မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုပါက အသက်ရှုမြန်ခြင်း ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဟာကတော့ တော်တော်လေးကိုအတွေ့ရများပါတယ်။
Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသက်ရှုမြန်ခြင်းဟာ ကြီးမားတဲ့ ပြသနာတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ မိနစ် ၂၀မှ ၃၀ထိကြာနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာပြောပြထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူပါ။
-ပထမဆုံးအကြိမ် အသက်ရှုမြန်ခြင်း ခပ်ပြင်းပြင်းရှိုက်ရှုခြင်း
-အိမ်တွင်းကုထုံးအချို့ကို ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပြီးတာတောင် အသက်ရှုမြန်နေသေးခြင်း
-မကြာခဏ သက်ပြင်းချခြင်းနှင့်အာသန်း ခြင်း
-ခြေ လက်နဲ့ပါးစပ်တစ်ဝိုက်နားမှာ ထုံနာ ကျင်နာဖြစ်ခြင်း
-ရင်ဘတ်ထဲပြည့်ကျပ်ခြင်း၊ရင်ဘတ်ထဲဖိထားသလိုဖြစ်နေခြင်း၊ ထိရင်နာခြင်းနှင့် နာကျင်နေခြင်း
တစ်ခြားလက္ခဏာတွေလည်း မကြာခဏဖြစ်နိုင်ပါတယ် အသက်ရှုမြန်ခြင်းနဲ့သိပ်ဆက်စပ်မှုမရှိပေမယ့်ပေါ့။ တစ်ချို့သော ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
-လေပွခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကျွတ်ထိုးခြင်း
-အမြင်အာရုံပြောင်းခြင်း ဥပမာ ဝါးခြင်းနှင့် မှောင်မှောင်မည်းမည်း မြင်နေခြင်း
-မှတ်ဉာဏ်များချို့ယွင်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း
သင့်မှာ အဲ့လိုခဏခဏဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ သင့်မှာ အသက်ရှုမြန်ခြင်းရောဂါရနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာသေချာရှင်းပြလို့မရပါဘူး ပြီးတော့ ကြောက်လန့်စိတ်လှုပ်ရှားရင်ဖြစ်တဲ့ရောဂါနဲ့လည်းလက္ခဏာတွေကဆင်တူနေတတ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါနဲ့လည်းလွဲမှားအမည်တပ်တပ်ကြပါတယ်။
Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသက်ရှုမြန်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကိုအများဆုံးဖြစ်စေတာတွေကတော့ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေ၊ထိတ်လန့်ခြင်းတွေ၊စိတ်ရှုပ်ထွေး ပင်ပန်းရတာတွေ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ပိုမိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းကနေမှမကြာခဏ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အခြားအကြောင်းအရင်းတွေကတော့
-အဆုတ်ရောဂါများဖြစ်တဲ့ COPD ဒါမှမဟုတ် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ
-နှလုံးရောဂါအခြေအနေများ ဥပမာ heart attack
-diabetic ketoacidosis (type 1 ဆီးချိုသမားများတွင် သွေးတွင်းအချိ ုဓါတ်အလွန်အမင်းတက်ခြင်းကြောင့် တွေ့ရသောနောက်ဆက်တွဲပြသနာ)
-အမြင့်ပေ ၆၀၀၀မှ ခရီးသွားခြင်း
ငါ့ဆီမှာ Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
(အခြားအချက်အလက်တွေသိရဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။)
Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က လူနာကို ခပ်မြန်မြန်စမ်းသပ်ပါမယ် အထူးသဖြင့် သွေးလှည့်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကို စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ဆရာဝန်က ရုတ်တရက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စရာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရာဇဝင်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ လူနာရဲ့ ရောဂါလက္ခါ အခြေအနေတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် တစ်ချို့သောစမ်းသပ်မှုများကို ပြ ုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်ရှုမြန်ခြင်းရောဂါလို့နာမည်တပ်သေချာပေါက်ပြောနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ခြားသောအကြောင်းအရင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်မှသာရတာကြောင့်ဒီလို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူနာကို သွေးကြောမှာ အပ်စိုက်ထားပြီး စောင့်ကြည့်တဲ့ စက်တွေလူနာမှာတပ်ထားမှာပါ။ အဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ကနေ
-အသက်ရှုထုတ်ခြင်း၊ပြန့်နှံခြင်း စကင်န် ရိုက်ခြင်း
-နှလုံးစက်ဆွဲခြင်းတို့ ပြ ုလုပ်နေပါမယ်။
တကယ်လို့ ဆရာဝန်က လူနာမှာ အသက်ရှုမြန်ခြင်းရောဂါထက်ပိုဆိုးတာကိုသံသယရှိခဲ့ပါက ဆေးရုံတက်ပြီး တစ်ခြားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတွေလုပ်ဖို့နဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ အသက်ရှုမြန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့
Hyperventilation (အသက်ရှုမြန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှုမြန်ခြင်းမျိုးမှာ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ စိတ်အေးဖို့ ကြိုးစားမှုဟာ အရေးပါပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ဘေးကနေ နည်းပေးလမ်းပြလုပ်ပေးနေရင်ပိုပြီးကူညီရာရောက်ပါတယ်။
ကုသမှုရဲ့ ပန်းတိုင်ကတော့ ဖြစ်နေချိန်မှာ အသက်ရှုနှုန်းကိုလျှော့ချဖို့ရယ်နဲ့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်တွင်းက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ကို တိုးပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့အသက်ရှုမြန်ခြင်းကိုကုသဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကိုသုံးပြီး ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
-စက္က ူအိတ်ထဲကို လေဖြည်းဖြည်းချင်းရှုသွင်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် လက်ခုပ်ထဲကို လေရှုသွင်းခြင်း
သင့်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ တစ်လှည့်စီအသက်ရှုခြင်း။ သင့်ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားပြီး နှာခေါင်းတစ်ဖက်စီနဲ့အသက်ရှုခြင်း။ ပြောရရင်တော့ ပါးစပ်ကိုကာထားပြီး၊ ညာဘက်နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားပြီး ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းကနေ ရှုခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ နောက်တစ်ခါ ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းကို ပိတ်ထားပြီး ညာဘက်နှာခေါင်းကနေရှုပါ။ ဒီလိုပုံစံကို ပုံမှန် အသက်ရှုခြင်းပြန်ရလာတဲ့အထိ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပါ။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ခပ်မြန်မြန်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ခပ်ဖွဖွပြေးခြင်းတို့နဲ့ အသက်ရှုသွင်း ရှုထုတ်တာကို သင့်နှာခေါင်းကနေ လုပ်ပေးတာကလည်း အသက်ရှုမြန်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
တကယ်လို့သင့်မှာ အသက်ရှုမြန်ခြင်းရောဂါရှိနေခဲ့ရင် သင်က ဘယ်အကြောင်းအရာတွေက ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာ ရှာဖွေချင်မှာပါ။ သင်က စိတ်ပူပန်မှုများခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းတွေ ရှိခဲ့ရင် စိတ်ရောဂါအထူးကုနဲ့ ပြပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ရင် ခံယူရမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းနှင့် အသက်ရှုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိရှိခြင်းက သင့်ရဲ့အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေမှာပါ။
အပ်စိုက်ကုသခြင်းကလည်း အသက်ရှုမြန်ခြင်း ရောဂါအတွက် ထိရောက်ပါတယ်။ အပ်စိုက်ကုသခြင်းဆိုတာ ရှေးကျတဲ့တရုတ်ရိုးရာ ဆေးနည်းပေါ်အခြေခံထားတဲ့ကုသခြင်းပါပဲ။ အပ်သေးသေးလေးတွေကို ခန္ဓါကိုယ်ပေါ်မှာ နေရာချထားပြီး ထိုးစိုက်ပြီး အနာကျက်မြန်အောင် လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့ အပ်စိုက်ကုသခြင်းက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလျှော့ချစေပြီးတော့ အသက်ရှုမြန်ခြင်းပြသနာကို ကူညီနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတာပေါ် ်မူတည်ပြီး သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကိုဆေးတွေ သောက်ဖို့ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။ အသက်ရှုမြန်ခြင်းအတွက် သောက်ရမယ့်ဆေးတွေရဲ့ ဥပမာတွေကတော့
အသက်ရှုမြန်ခြင်းကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကဘာတွေလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
-နှာခေါင်းတစ်ဖက်စီပြောင်းပြီး အသက်ရှုခြင်း၊အသက်ကို ရှိုက်ရှုခြင်း၊ အသက်ကို ဝအောင် ရှုခြင်း
-စိတ်နဲ့ခန္ဓါကိုယ်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ ဥပမာ ထိုက်ချိ၊ယောဂ
အသက်ရှုမြန်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံ ခံစားလာရပါက စိတ်ကောကိုယ်ပါ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သင့်အသက်ရှုမှုကို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေဖို့ အိမ်တွင်းကုထုံး နည်းလမ်းတွေကို ကြိုးစားကြည့်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါ။ အသက်ရှုမြန်ခြင်းကို ကုသလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် သင့်မှာအခြေခံ ပြသနာတွေရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုသေချာရှာပြီး သင့်တော်တဲ့ကုသမှုပေးဖို့ကူညီပါလိမ့်မယ်။
Hyperventilation. https://www.healthline.com/symptom/hyperventilation. Accessed October 16, 2017
Hyperventilation. https://www.emedicinehealth.com/hyperventilation/page3_em.htm. Accessed October 16, 2017